इतिहास किन पढ्ने ? कसरी बुझ्ने ? | Ratopati
इतिहास किन पढ्ने ? कसरी बुझ्ने ?
हाम्रो इतिहास राजामहाराजाहरुका वंशावली, तिनिहरुले जितेका लडाइहरु वा तिनको श्रीमतीहरु बीचमा भएको झगडा पढाउने कुरामा सीमित
personआहुति exploreकाठमाडौं access_timeपुस १६, २०७५ chat_bubble_outline0
नेपालमा इतिहास भनेर जे विषयलाई लामो समयसम्म पढाइयो वा जोड दिइयो, इतिहासको दायरा त्यति मात्र हुँदो रहेनछ । इतिहास कसले लेख्यो र किन लेखियो भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने पनि रहेछ । पहिलो साहित्यिक कृतिमा लेखक सबैभन्दा बढी व्यक्त हुन्छ भनेजस्तै, इतिहासमा पनि लेखक वा इतिहासकार आफू व्यक्त हुने प्रयत्न गर्छ, सचेत रुपमा र अचेत रुपमा पनि । जस्तै बाबुराम आचार्यले सगरमाथा भनेर नाम राख्नुभयो । त्यसमा के व्यक्त भयो त ? जबकी त्यसको परम्परागत नाम त चोमोलोङ्मा थियो । स्थानीय भाषामा अहिले पनि छ । बाबुराम आचार्यले त्यसलाई सगरमाथा भन्नुभयो । त्यहाँ बाबुराम आचार्य हुर्किएको सभ्यता व्यक्त भयो । उहाँ हिन्दु हुनुहुन्थ्यो । संस्कृत परिवारबाट आउनु भएको थियो र खस नेपाली भाषी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले बाबुराम आचार्य इतिहासकार व्यक्त हुनुभयो ।
इतिहास वर्तमानको गर्व हो । जहाँबाट वर्तमान जन्मिन्छ । वर्तमान फेरि इतिहास हुन्छ भविष्यका निम्ति । यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो इतिहासलाई राजामहाराजाहरुका वंशावली पढाउने बढीमा तिनिहरुले जितेका लडाइहरु पढाउने वा तिनको श्रीमतीहरु बीचमा भएको झगडा पढाउने कुरामा सीमित गरिदियो ।
जस्तो कि समृद्धि गर्छौ भनेर हल्ला चलेको छ । तर राज्यका मानिसले भन्दैनन् नेपाल गरिब हुनको इतिहास के हो ? यसको ऐतिहासिक शृङ्खला होला नि । हाम्रो देश गरिब पैदा भएको त होइन । हामीसँग गरिबीको इतिहास नै छैन । यो देश किन गरिब भएको हो भन्ने उत्तर दिएर त्यो कमजोरी हटाएपछि धनी हुने होला । जस्तो, म सँग पैसा छैन भनेपछि किन छैन भन्ने थाहा भएपछि मात्र पैसा जोगाउने उपाय आउने होला नि । देश किन गरिब भएको कोही पनि भन्नेवाला छैनन् । सबैले समृद्धि गरिदिन्छु भनेका छन्, कसैले किन गरिब भएको भन्दैनन् । संसारमा भारतको पटनालाई पूर्वको राजधानी भनिन्थ्यो । नेपालको बाग्मती उपत्यकालाई एउटा समृद्ध शहर मानिन्थ्यो । यहाँको ललितकला देखि लिएर हरेक चिजमा चीन र भारत एकदम लोभिन्थे । त्यति सानदार ठाउँ थियो यो । उब्जनीको हिसाबले पनि र सबै हिसाबले पनि । गरिबी कहाँबाट सुरु भयो त ? यसको इतिहास के हो ? वास्तवमा सरल कुरा के हो भने जंगबहादुर जुनवेला बेलायत गए, त्यो बेला आफ्नो सत्ता टिकाउन बेलायतीको सहयोग मागे । बेलायतीहरुको हरेक सर्तहरु मान्न तयार भए । त्यसैको शृङ्खलामा १८८२/८३ मा चन्द्रशमशेर जब बेलायत गए, बेलायतीको चार पाँचओटा सर्त मानेर आए ।
१३०० मेगावाट बिजुली भए हामीलाई पुगिहाल्यो । २००० मेगावाट बनाउने हो भने पाँच वर्षमा बनाइहाल्छौँ । पहिला त यो देशलाई जति चाहिन्छ त्यति बनाउनुपर्याे । अनि पो विदेशलाई बेच्ने सोच्नुपर्याे । १००० मेगावाट बनाउन पर्याे भने न्युनतम पनि २०/२५ अर्ब पैसा चाहियो । २०/२५ अर्ब लिएर जो आउँछ बैधानिक रुपमा नै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तीन प्रतिशत कमिसन खान्छ । जब भ्रष्ट देशमा आइसकेपछि वैधानिक यहाँ चल्दैन्,ा अवैधानिक दिनुपर्छ भनेर ५/१० प्रतिशत छुट्टै दिन्छन् । २० अर्बको पाँच प्रतिशत कति भयो ? कसैले चुनाव लड्नुपरेको छ, प्रधानमन्त्री हुनु परेको छ सात पुस्तादेखि नकमाएको पैसा कमाउनु परेको छ । अब कसले ३० मेगावाट बनाउन जान्छ ? ७०० मेगावाट ताक्छ । अनि जनताको अगाडि मै हुँ बन्यो । जबकि ७०० मेगावाट जानेको मान्छेलाई के थाहा छ भने अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आइसकेपछि त्यो बनाउन १५ देखि २० वर्ष लाग्छ । ३० वर्ष उसले खान्छ र ५० वर्षपछि मर्मत गर्ने भाग हामीलाई छाडेर जान्छ । । अबको ५० वर्षपछि हामीले नाफा कमाउने हुन्छ ? अबको ५० वर्षपछि पनि दुनियाँमा पानीबाट विजुली निकाल्ने भन्ने विज्ञान होला त ? प्रत्येक महिना विज्ञान प्रविधि यसरी फड्को मारिरहेको छ, ५० वर्षपछि उसले खाइसकेपछि हामीले नाफा कमाउँला भनेर ५० वर्षपछि यही हाइड्रोपावर कुरेर बस्ला त विश्व ? बस्दैन । अहिलेको विज्ञान प्रविधिको विकासलाई हेर्दा ५० वर्षपछि ठूला ठूला पोखरी खनौँला, टर्वाइन घुमाउला, बिजुली निकालौंला अनि भारतलाई बेचाँैला भन्ने हाम्रो मूल दृष्टिकोण नै खतम, अवैज्ञानिक र कचकचे छ । यो भाषण गर्न मात्र काम लाग्छ । मानिलिऔं, ५० वर्षपछि पनि यही जलविद्युत बाँकी रह्यो भने २ ओटा खतरा छन् । एउटा हाम्रो देश हिमाली, पहाडी, भित्री मधेश र तराई क्षेत्र भएको देश हो । सबै ठूला पोखरीहरु हामी पहाडमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । तराईमा बनाएर विजुली निस्किन्न । महाकालीमा, अरुणमा, तामाकोशीमा, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, करौडौ लिटर पानी जम्मा गर्ने । हामी पहाडमा यति ठूला ठूला जलाशय बनाउँदै छौँ भुकम्पीय जोखिम भएको देशमा । च्छोरोल्पा फुट्न लाग्यो भने जनकपुरमा पनि हाहाकार मच्चिन्छ । च्छोरोल्पा भन्दा ५/६ सय गुना बढी ठूला तालहरु पहाडभरि बनायो भने यो देशको हालत के हुन्छ ? वास्तवमा यसको इतिहास भनेको उत्पिडित राष्ट्रका भ्रष्ट मानिसले पैसा कमाउने तरिका हो, अरु केही पनि होइन । पैसा आयो बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना बेचिदियो । अस्ति एउटा नेताले भन्दै थियो बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना नीजिकरण गरेर के भयो ? पहिला छालाको जुत्ता सिलाइन्थ्यो अहिले मान्छेका मुटु सिलाइन्छ । के भन्या त्यो ? कस्तो बुझाइ ? कसरी दिमाग निर्माण भएको ? कसरी सुचनाहरु संकलन गरेको ? कसरी प्रशोधन गरेको सुचना ?
वामपन्थी नेता तथा मार्क्सवादी चिन्तक ।